न्यायाधीश सपना मल्ल अझै राष्ट्रसंघमा पनि जागिरे ! - Nepal News - Latest News from Nepal
न्यायाधीश सपना मल्ल अझै राष्ट्रसंघमा पनि जागिरे !
By nepalnews	 Last updated Aug 8, 2016
काठमाडौं,साउन २४ । हालै सर्वोच्च अदालतमा स्थायी न्यायाधीश नियुक्त भएकी सपना मल्ला प्रधान राष्ट्रसंघीय निकायमा अझै पनि कार्यरत छिन्। एक साताअघि मात्रै सर्वोच्च अदालतको न्यायधीश भएकी प्रधान जेनेभास्थित यातनाविरुद्धको राष्ट्रसंघीय समिति ९क्याट० मा स्वतन्त्र विज्ञ सदस्यका रुपमा कार्यरत छिन्।
नेपाल सरकारले अधिकारकर्मी तथा बरिष्ठ अधिवक्ता रहेकी प्रधानलाई उक्त पदका लागि सन् २०१४ मा मनोनयन गरेको थियो। प्रधानले उक्त पदबाट हालसम्म राजीनामा नदिएको एक सरकारी अधिकारीले बताए।
उनको पदावधि सन् २०१७ अक्टुबरसम्म छ। न्यायाधीश नियुक्त भइसकेपछि राष्ट्रसंघीय पदमा रहिरहनु उपयुक्त नहुने सरकारी अधिकारीको भनाई छ। ‘प्रधानले राष्ट्रसंघीय समितिबाट राजीनामा दिनु भएको छैन। उहाँले व्यक्तिगत रुपमा राजीनामा दिएको भएपनि जानकारी गराउनु भएको छैन। ,’जेनेभास्थित नेपाली स्थायी नियोगका एक अधिकारीले टेलिफोनमा भने।ब
न्यायाधीश व्यक्तिलाई कुने पनि लाभको पदमा देशभित्र वा बाहिर समानान्तर पदीय हैसियतमा रहन निषेध गरिएको भएपनि प्रधान भने अझै राष्ट्रसंघीय पदमा रहनु विरोधाभासपूर्ण रहेको एक कुटनीतिज्ञले बताए। अन्नपूर्ण पोस्टमा समाचार छ।
मधेसी मोर्चा सरकारमा जाला ?
कहिले हुन्छ सरकार विस्तार? माओवादी र कांग्रेसभित्र मन्त्री छान्न सकस